Yini i-Urticaria? - Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Yokungezwani Nezitho Zomoya
Yini i-Urticaria?Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-02T14:48:29+01:00
I-Urticaria yisifo esivamile. Kungenzeka nganoma yisiphi isikhathi, kusukela ebuntwaneni kuze kube semdala. Amaphesenti angamashumi amabili nanhlanu abo bonke abantu athinteka yilo kanye ezimpilweni zabo. Ezimweni eziningi, kunzima. Ngokwezibalo ezilandelanayo, i-1.0% yabantu baseYurophu njengamanje ihlushwa i-urticaria engapheli. Ngokungafani nezingane, okungekho kuzo izigameko eziqondene nobulili ezithile ze-urticaria (isifuba) ezingatholwa kuze kube manje, i-urticaria kubantu abadala yenzeka kakhulu kwabesifazane. Ngokuphathelene ne-urticaria engapheli, isilinganiso cishe siyi-2: 1. Abantu abaphakathi kweminyaka engama-30 nengama-50 bavame ukuthinteka. Kubantu abaneminyaka engama-70 noma ngaphezulu, kwenzeka ngokungavamile. Ngokuphambene nalokho, isifuba ezinganeni ezisanda kuzalwa, esivame ukuhlala ezinsukwini ezimbalwa nje, asijwayelekile.
I-Urticaria ibonakala ngokuqala okungazelelwe kwamavili alumayo kanye / noma i-angioedema. Isikhumba somzimba wonke noma ingxenye ethile kuphela singathinteka. Amasondo angavela kuphela ekuphenduleni izinto ezithile (isb. Ukubanda, ingcindezi, noma ukukhanya kwelanga) noma ngokuzenzekelayo, okungukuthi, ngokusobala ngaphandle kwesizathu esithile.
Isondo linezici ezintathu ezijwayelekile:
ukuvuvukala okungaphezulu kwesikhumba samasayizi ahlukahlukene, cishe ngaso sonke isikhathi kuzungezwe ububomvu
ukulunywa noma ukushiswa
ukungazinzi - ukubonakala kwesikhumba kuvame ukubuyela kokujwayelekile kungakapheli amahora angu-1-24.
Ekubukekeni kwawo, la maqhuqhuva afana nokuvuvukala kwesikhumba okubangelwa yizinwele ezihlabayo zembabazane (Lat. Urtica dioica). Indawo ethintekile yesikhumba iyavuvukala futhi iqale ibe bomvu bese kamuva ibomvu ibe mhlophe maphakathi nendawo bese ibomvu nxazonke. Amavili abonakala ephikelela kwesinye isikhathi noma "efuduka". Lo mbono uvela eqinisweni lokuthi leli sondo liyanyamalala ngempela, kodwa eduze kwalo kukhona elisha. Esikhathini esiningi kukhona ukuvuvukala okujulile kwesikhumba — okuthiwa i-angioedema — ngaphezu kwesifuba (kwesinye isikhathi ngaphandle kwesifuba).
I-Urticaria ingenye yezifo ezivame kakhulu zesikhumba. Kuyaziwa nangaphansi kwegama lesifuba noma ukuqubuka kwembabazane. Cishe umuntu oyedwa kwabane uthola i-urticaria phakathi nempilo yakhe. Eziningi zalezi ziqephu zihlala izinsuku ezimbalwa noma amasonto ambalwa futhi azinankinga. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-acute urticaria. Okunzima kakhulu (ukubekezelela nokwelapha) yilawo macala ahlala izinyanga noma iminyaka eminingana (kwesinye isikhathi amashumi eminyaka). Leli gama lisuselwa kumbabazane ohlabayo (Lat. Urticaria dioica noma i-Urticaria urens, urere = burn) - ngokungangabazeki ngoba isikhumba sibukeka ngokufana esimweni sesifuba njengokungathi umuntu "ushile" ngezimbabazane ezihlabayo.